အင်ဒိုနီးရှားရောက် ဗမာတယောက် (Maung Myanmar (Indonesia)) | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မြန်မာ (ခေတ္တ အင်ဒိုနီးရှား)၊ သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂
အလျင်းသင့်လိုအင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံနဲ့ သူတို့လူမျိုးရဲ့အကြောင်း မိမိအတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး တင်ပြပါရစေ။ မိမိသည် နိင်ငံရပ်ခြားရှိ companyတစ်ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂နှစ် February တွင်အင်ဒို နီးရှား နိင်ငံ Jakarta၊ Surabaya၊Java၊ Makassar၊Manado၊ Bali၊ Sumatra၊ Pontianak၊ Medan မြို့များ၊ ကျွန်းများ သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် company တာဝန်ဖြင့် နှစ်လနီးပါးသွားရမယ် ဆိုတာ သိရတော့ မသွားခင်မှာ လူ့သဘာဝ အရစိတ်လှူပ်ရှား (ကြောက်စိတ်ဝင်မိတယ် ဆိုရင် ပိုမှန်ပါတယ်)။ မိပါတယ်။ အများသိတဲ့အတိုင်း အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံရဲ့ (12 October 2002 Bali Nightclub attacks) ဟာလူတွေကို အထူးတုန်လူပ်စေခဲ့ပါ တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရောက်ခြင်း ၄-၅ ရက်မှာ စိတ်က မရဲတရဲတရဲ နဲ့ စိုးရိမ်မှူလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆယ်ရက်-နှစ်ပါတ်ခန့် သူတို့လူမျိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ အများစုသော သူတို့လူမျိုး တွေဟာ ဖော်ရွေကြပြီး နှစ်နှစ်လိုလို ကူညီချင်တဲ့စိတ်တွေရှိကြတာကို အံ့သြဖွယ်တွေ့ရလို့ နောက်ပိုင်းမှာ မိမိအနေ နဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း သွားလာရဲလာပါတယ်။
ထိုအချိန်က မိမိအား မည်သည့်နိင်ငံသားလဲ ဟု မေးပါက မိမိ၏အကျင့် (နိင်ငံခြားသားများအား မိမိတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခေသူတွေမဟုတ်ကြောင်းသိစေလိုခြင်း) အတိုင်း နှစ်လိုစွာဖြင့် “ I’m from Myanmar ” ဟု ဖြေကြားရတာကို ကြည်နူး ( pleased ) ဂုဏ်ယူ (proud ) မိပါတယ်။ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားလို နိုင်ငံတွေမှာ“ I’m from Myanmar” လို့ပြောရင် အဲဒီလူမျိုးတွေက သင့်ရဲ့ရာထူး၊ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း၊ ငွေကြေးသံုးစွဲနိင်မှု အစရှိ တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် သင့်ကို ဖော်ရွေပျူငှာစွာ ဆက်ဆံကောင်း ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် များစွာသော အဲဒီ နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတွေဟာ မိမိတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံ့ချင်တဲ့စိတ် ရှိတယ်လို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားလို နိုင်ငံတွေမှာ မိမိတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကို ” foreigner” အဖြစ် မမြင်ပါ ဘူး။ သူတို့တိုင်းပြည်ကလူမျိုးတွေ မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို ဈေးပေါပေါ၊ လခပေါပေါနဲ့ အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေ လို့ အများအားဖြင့် အထင်မကြီးစွာ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
8 April 2012 မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Manado မြို့လေးကို ရောက်ပါတယ်။ Manado မြို့နေလူများစုဟာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရောက်တဲ့အချိန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကာလတစ်ခု ဖြစ်လို့ အိမ်တိုင်းနီးနီးလိုရဲ့ အရှေ့မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ သင်္ကေတလက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်အသားကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်မြင်သာသာ ချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်။ Manado မြို့လေးကနေ ကားနဲ့ တစ်နာရီခန့် သွားရတဲ့ပင်လယ်ကမ်း ခြေရောက်တဲ့အထိ လမ်းတစ်လျှောက် အိမ်တွေအရှေ့မှာလဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့သင်္ကေတ လက်ဝါးကပ်တိုင် အမှတ်အသားကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်မြင်သာသာ ချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်။ အဲဒီလိုလက်ဝါးကပ်တိုင်အထိမ်းအမှတ်ကို ချိတ်ဆွဲထားကြတဲ့အိမ်ဟာ မြို့လုံးကျွတ်နီးပါးလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် အရေအတွက်အားဖြင့်များလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ် Aug 2012 အင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံသို့် လာရာမှာတော့ ပထမတစ်ကြိမ် နဲ့မတူတော့ဘဲ မည်သည့်နိင်ငံသားလည်းဟု မေးပါက “I’m from Myanmar” အစား မိမိအလုပ်လုပ်သည့်တိုင်းပြည်ရဲ့အမည် ကိုပဲ သုံးပြီး ဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပေးတဲ့ မှတ်ချက်၊ Bangkok post web site ရဲ့4Aug 2012 မှာဖေါ်ပြတဲ့သတင်း (Jailed Islamist cleric Abu Bakar Bashir threatened to wage war if Myanmar continues to harm Muslim Rohingyas, inaletter to the country’s president Thein Sein seen onawebsite Friday voa-islam့com )၊ အင်ဒိုနီး ရှားနိင်ငံရဲ့ TV သ တင်းဌာန “TV ONE ” ရဲ့ “Muslim Rohingya disbute ( dispute ) warga ( citizen ) illegal Bangladesh ”ခေါင်းစဉ်နဲ့5Aug 20129pmသတင်းမှာလည်း ဒီအကြောင်းတွေကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေး နေတာ တွေတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် မိမိအနေနဲ့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေသင့်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်မိပါတယ်။
မိမိရဲ့မိတ်ဆွေ အင်ဒိုနီးရှားနိင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးကို မိမိက ဒီတစ်ခေါက်(Aug 2012) မိမိလာရာမှာ အရင်တစ် ခေါက်နဲ့မတူ၊ သတိတထားနဲ့ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်တဲ့အကြောင်း ပြောတော့ မိမိမိတ်ဆွေက အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး အများစုသည် ဖော်ရွေပြီး ကူညီလိုစိတ်ရှိကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ အနည်းငယ်သောလူတစ်စု၏ လုပ်ရပ်မမှန်ကန်မှု ကြောင့် လူအများက အထင်အမြင်လွဲမှုဖြစ်ရကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ မိမိမိတ်ဆွေပြောတာကို မိမိအနေနဲ့လည်းသူ ပြောတာမမှားဘူး လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။
တကယ်တော့ အများစုသောလူသားတွေအားလုံးဟာ အကြင်နာတွေကိုယ်စီ ရှိကြသူတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်၊ လူတစ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကြား၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အကြား၊ တစ်နိင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံအကြား ကြီးမားသော နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဒုနဲ့ ဒေးဆိုတာ အားလုံးအသိပါဘဲ။
(Photo credit – http://andy-pants.deviantart.com/art/Coexist-Live-Learn-Together-160101094?q=favby%3Athe-coexist-group%2F39763857&qo=5 )
3 Responses to အင်ဒိုနီးရှားရောက် ဗမာတယောက် (Maung Myanmar (Indonesia))
Myat Min on August 11, 2012 at 11:50 am
What messages do you want to give?
shinyehtut on August 11, 2012 at 7:30 pm
why you so serious. Be optimistic mate…
A Lin Zet on August 11, 2012 at 12:15 pm